FOMBA SAKALAVA : Hita ao amin’ny « salon du livre et de la culture » ao amin’ny zaridaina Ralaimongo
Anisan’ireo manao fampirantiana ao amin’ny salon du livre et de la culture ao amin’ny zaridaina Ralaimongo ny mozea Akiba. 10 mai 2019
Misy fomba sakalava vitsivitsy asehon’izy ireo ao dia ny ranginala sy ny tromba. Amin’ny ankapobeny dia mifana ny vehivavy malagasy rehefa avy miteraka izany hoe mifono tanteraka mba tsy ho tratry ny hatsiaka ary tsy miala eo am-pandriana. Ny rangonala kosa dia mamonjy rano avy hatrany aorian’ny nahaterahana ary mijoboka anaty rano, ny reniny sy ny zaza ary miteny hoe : ‘teraka soa aman-tsara ilay zaza’. Raha tsy misy ranobe kosa fa an-tanàn-dehibe dia topazana rano roa siny ny terabao ary miteny hatrany hoe : ‘teraka soa aman-tsara ilay zaza’.
Araka ny fanazavana azo dia sady fandraisana ny zaza ho olombelona sy fanadiovana io fomba io. Afaka herinandro dia ampijerena masoandro ny zaza no sady manao joro amin’ny razana. Tsy mety amin’ny vehivavy rangonala mihitsy ny mifana fa mitondra aretina ho azy.
Rehefa maty kosa ny dady na dadilahy izay zato taona mahery dia tsy itomaniana fa avela ho somoain-jafy. Izany hoe anaovana fety, ary mialoha ny handevenana azy dia batain’ireo zafikeliny entina manodidina ny tanàna no sady miantsa sy mihosiky ary mandihy izy ireo. Tsy hoe faly amin’ny nahafatesany akory fa faly noho izy nahatratra taona maro ny nahita zafy maro nifandimby.
Mbola mampiavaka ny faritra sakalava koa ny tromba izay fomba tranainy efa nisy mialoha ny nahatongavan’ny maroseranana. Fanahin’olona efa maty miverina ka mipetraka amin’ny olona velona ny tromba. Ny feony no ahafantarana azy na lahy na vavy. Rehefa mitady hipetraka amin’ny olona iray izy ireo dia misy famantarana, na marary lava ilay olona, ohatra. Araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra iray ao amin’ny mozea akiba dia mila mandeha amin’ny moasy io olona io ka ny moasy no mampahafantatra azy ny tokony hataony, ny tian’ilay tromba sy ny tsy tiany ary ny fady. Raha tsy tia ipetrahan’ny tromba kosa dia mila mivavaka ary manana finoana mafy fototra. Saha no iantsoana ireo olona ianjahan’ny tromba na fanahy efa lasan-ko razana, Zanahary kosa no iantsoana ireo fanahy miverina anatin’ny saha.
Tsy zanahary mpamorona izy fa anarana omena azy mba tsy hanononana be loatra ny anarany io. Mihosotra tany malandy ny saha rehefa hihanjaka ny zanahary. Mbola maro eto Mahajanga ny olona misy tromba. Amin’ny fotoan’ny fanompoabe dia tena maro izy ireo no mankeny amin’ny doany. Amin’ny andavanandro kosa dia misy ireo tromba mpitsabo hita eny amin’ny fiarahamonina. Misy dia misy ihany koa anefa ny mamorika.
Iray namoy ny ainy, nitohana tanteraka ny fifamoivoizana KAMIAOBE NIFANDONA TANY AMIN’NY RN2 (152) 19 août 2019 Nokendain’ilay jiolahy ilay ramatoa, lasa ny entana sarobidy rehetra AMBOHIDRAPETO (119) 19 août 2019 Efa any am-ponja vonjimaika ilay tovolahy FANOLANAN-JAZA TENY AMIN’NY PORT (115) 22 août 2019 Olona 4 namoy ny ainy, 19 naratra mafy LOZAM-PIFAMOIVOIZANA TAO MAEVATANANA (111) 20 août 2019 Tsy mitombina ny filazana fa nahita lohan’olona maty ilay ankizivavy TONIA MPAMPANOA LALANA (85) 21 août 2019 Tra-tehaka ireo 3 lahy saika hanondrana volamena an-tsokosoko NOSY BE HELL-VILLE (81) 22 août 2019